Maamulka Gobolka Banaadir oo biyo iyo adeegyo kale gaarsiiyay Qaxootiga Yemen ee Muqdisho ku sugan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Gobolka Banaadir oo biyo iyo adeegyo kale gaarsiiyay Qaxootiga Yemen ee Muqdisho ku sugan
MAREEG 30 September 2015 30 September 2015
Mas’uuliyiin uu horkacayay Kusimaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Guddoomiye kuxigeenka dhinaca siyaasada Maxamed Axmed Diiriye ayaa kaalmo isugu jirta biyo dhaamin iyo adeegyo kale gaarsiiyay Qaxootiga Yemen ee ku sugan Xarunta Safaaradda Yemen ee degmada Shingaani.
Adeegyada uu la gaaray Maamulka Gobolka Banaadir qoysaska Yemeniyiinta ayaa kadambeysay markii uu u kuur galay xaalada ay ku sugan yihiin qaxootiga, waxaana si horu dhac ah oo deg deg ah loola gaaray adeeg biyo kaasoo ay dhaaminayeen gawaarida booyadaha uu leeyahay maamulka Gobolka Banaadir, kaasoo laga soo dhaaminayay ceel uu leeyahay Gobolka.
Sidoo kale waxaa la arkayay gawaarida nadaafadda iyo shaqaalahooda oo ka samaynaya xarunta howlo nadaafadeed, maadaama ay ka jirtay xaalado aad u liita ee nadaafad xumo ah.
Guddoomiyaha degmada Shingaani Axmed Xasan Yalaxoow ayaa sheegay qaxootigan ay qabaan baahiyo kala duwan, sida cuntada, biyaha, Nadaafadda, Caafimaadka, waxbarashada iyo koronto, isagoo ku baaqay in kalmo bani’aadanimo oo baahidooda daboola loo fidiyo.
Dadkii ku jiray xerada ayaa waxaa ay aad u soo dhoweeyeen kaalmada biyo dhaaminta ee loo fidiyay, iyagoo sheegay in ay baahi aad u weyn u qabeen biyo ay cabaan, waxaana ay u mahad celiyeen Maamulka Gobolka Banaadir.
Ugu danbayn ayaa waxaa goobta ka hadlay kusimaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye oo goobta ka sheegay in laga bilaabo maanta ay si joogto ah u heli doonaan biyo macaan oo nadaafadooda laga shaqeeyay, kaasoo uu soo dhaamin doono maalin walba, sidoo kalena la dhisi doono Haanta biyaha lagu keydiyo.
Sidoo kale waxaa uu balan qaaday in xerada ay ku nool yihiin qaxootigan laga hirgelin doono nalalka cad-ceeda ku shaqeeya ee Solar-ka loo yaqaano, isla markaana Maamulka uu dadaal ku bixin doono sidii waxbarasho iyo caafimaad u heli lahaayeen qaxootigaas.
Waxaa uu ugu baaqay dadka Muxsiniinta iyo hey’adaha caalamiga inay il gaar ah ku fiiriyaan qaxootigan Yemeniyiinta ah, waxaana uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay kaalin wax ku ool ah ka geysan doonaan caawinta qaxootigan.
Eradicating the ills of smoke
Categories Select Category Af Soomaali (10,685) Africa (2,397) Algeria (4) Angola (11) Burkina Faso (1) Burundi (14) Cameroon (32) chad (7) congo (61) Djibouti (29) Egypt (68) Eritrea (48) Ethiopia (175) gabon (2) gambia (6) Ghana (21) guinea (1) Guinea-Bissau (4) Ivory Coast (5) Kenya (273) Liberia (23) Libya (76) mali (8) Mauritanian (1) Morocco (20) Namibia (2) niger (8) Nigeria (55) rwanda (15) Sierra Leone (13) South Africa (91) south sudan (94) sudan (41) Tanzania (16) Tunisia (10) uganda (55) Zambia (16) Zimbabwe (27) Asia (427) Afghanistan (19) Bangladesh (4) china (218) India (24) indonesia (12) Malaysia (1) mynamar (6) north korea (2) pakistan (17) Philippine (3) Singapore (1) Australia (16) Business (291) Business (6) canada (1) Economy (168) Editorial (521) Education (39) Entertainment (67) Europe (629) Austria (9) belgium (1) France (26) German (38) Ireland (3) Italy (18) Rusia (35) spain (37) turkey (43) Ukraine (4) United Kindom (185) Exclusive (7) Fashion (4) Featured (8,331) Food (54) Health (241) Horn of Africa (165) Islam (84) Mareeg العربية (3) Middle East (400) Iran (16) Iraq (37) Israel (58) kuwait (4) qatar (10) Saudi Arabia (58) syria (40) UAE (11) Yeman (29) Notices (6) Opinion (59) Our Contacts (1) politics (54) Science (67) Senegal (2) sheeko-jaceyl iyo love (5) sidebar (3) Somalia (5,462) Archive of mareeg (12) Sports (290) technology (58) travel (8) ubax-sheeko.htm (1) Uncategorized (252) United states of america (254) World news (599) PARAGUAY (1) Venezuela (4)